WaseMelika odumile umlingisi, umkhiqizi, umqondisi kanye umbhali Vin Diesel uye wavela ezithombeni eziningi nge Tattoos ezahlukene. Aziyona unomphela, noma enziwe njengoba isikhathi-movie? Tattoo Vin Diesel-impikiswano isisindo futhi bavame ukuxoxa umphakathi.
Ngubani Vin Diesel?
Lo mlingisi ethandwa wazalwa ngo-1967, igama lakhe langempela kuyinto Mark Sinclair Vincent. It wakhuliswa ngumama wakhe - Udokotela wezifo zengqondo, ngezinkanyezi, nobaba, ubesebenza njengodokotela wezifo umphathi ezigcawugcawu. Izinyathelo zokuqala kudalwa Vin Diesel kakade ayenzile engu-eziyisikhombisa, ngesikhathi yena nabangani bakhe bagqekeza netiyetha ukwenza ilandelana. Kodwa umqondisi ethiyetha nobuciko, esabamba nabo isenzo, esikhundleni sokushaya amaphoyisa, okunikelwe iqhaza ekukhiqizeni. Ngakho Tomboy kancane kancane umsebenzi. He is kakhulu othanda yemidlalo, futhi kamuva waya Hollywood babe kumdlali, kodwa indlela yakhe ekunakeni Kwakungelula. Wayesebenza kanzima futhi waqiniseka ayewaphuphile - ukuba abe umqondisi kanye umlingisi.
Nasibuka izithombe umlingisi odumile e-movie wokulwa, wenza ngezikhathi ezahlukahlukene, uzophawula ukuthi ubuciko ingcaca lomzimba wakhe kushintsha njalo. Ingabe lokhu kusho ukuthi midwebo yayingeyesikhashana Vin Diesel?
Esikhathini ifilimu "XXX" umlingisi inkanyezi kukaXander Cage, lapho umzimba wakhe laligcwele ezihlukahlukene Tattoos - kusukela elula uhlobo ezahlukene okunenjongo mathupha.
Kathathu "X" ngemuva entanyeni, kanye nezibhamu ezimbili, wawela ngemuva, zazibaluleke indima yakhe movie "XXX". Hand Tattoos nazo ezimboziwe, kuhlanganise amafu, amalangabi inkunzi isithombe, amagama ambalwa futhi inkanyezi kusukela iso. Ukuze le movie Vin Dizel ithole elinye tattoo bemvelo siqu. Wabonisa ukuthi kwaba fan oshisekayo imidlalo yama-computer Dungeous Dragons iminyaka eminingi, futhi wakhe isidlaliso Melkor achitheka ngesisu sakhe. Ezinye izindaba zika-art umzimba okubaluleke ngempela kuphela ngaphansi kohlaka umlingiswa oqanjiwe.
Ngokuba ifilimu "waseBhabhele" tattoo Vin Diesel ziye bahlangana isitayela waseGibhithe, futhi uhlotshaniswa nokulumba. Ngokwesibonelo, emhlane wakhe kwaba omkhulu ongokomfanekiso inhlanganisela -skarabey. Kuyinto iwuphawu ukungafi Ezinganekwaneni zaseGibithe, nokhozi ubeqhakambisa isibindi nokuqina ngokomoya.
Tattoo Vin Diesel zingezesikhashana futhi iyashiyana indima. Abanye babo baye Inzuzo engokomlando ongokomfanekiso ejulile kakhulu, kanye nezinye - nje ubuhle.
Tattoo behlonipha Paul Walker
Akungabazeki ukuthi Vin Diesel wezwa ubuhlungu lapho umngani wakhe umlingani e ifilimu "Fast and Furious" UPawulu Walker washona engozini yemoto ngo-2013. Sekuyisikhathi eside balilela ukufa umlingisi sekwephuzile ngisho okuthiwa indodakazi yakhe Pauline (Pauline). Futhi ngemuva kukhona omnyama nomhlophe tattoo entsha - ingelosi amaphiko izithombe babelithanda amehlo nomunye.
Udizili futhi Walker elalihlangana 2001, ngesikhathi abasolwa ngowokuqala "Fast kanye Furious", kodwa kuphela 2008, ngesikhathi kokuqoshwa isitolimende wesine e franchise yaba nobuhlobo obuseduze phakathi kwazo. Abalisa ababili babe ngempela abangane abakhulu. Futhi lapho uPawulu wafela, isiqeshana Udizili lwafa kanye naye. Uma ngesikhathi enengxoxo yavuma ukuthi, ethi Walker yikona okungcono kithi, kwaba umuntu sokuzidela, kanye sibalo ezibalulekile ekuphileni kwakhe. Tattoo Vin Diesel - kuyinto intela nomhlobo wakhe.
Pure njengoba ephepheni
Vin Diesel tattoo ngomlenze wakhe, emuva, isisu izingalo zingezesikhashana. Lo mlingisi othanda bahlobise umzimba wakho, kodwa hhayi kuze kube sezingeni, ukugqoka ukuphila kwabo. Enye iphethini sibukeka sisihle zezemidlalo sibalo umlingisi, yena njalo ekuthuthukiseni in ejimini. Tattoos Lovely wenza master ezidumile okuthiwa uChristian Kinsley futhi kusetshenziswa uyinki okhethekile futhi amanzi avamile, Uyi umhlobiso olukhulu uhlamvu ngesihluku kakade.
Vin Diesel - kungcono kakhulu nje cool guy. Uyindoda yamakhono eziningi. Nazi ezinye izinto ezithakazelisayo mayelana nomdlali, ungubani cishe angazanga.
Igama lakhe langempela kuyinto Mark Sinclair.
Ngezinye Vin Diesel has umzalwane ayiwele naye, Pol Vinsent.
Udizili wayebuye ukufuneka kakhulu esiteji.
Star amakhamera TV futhi engumlobi, umqondisi kanye umkhiqizi.
Lo mlingisi unezingane ezintathu.
Udizili lizwakalise omunye izinhlamvu "ababheki the Galaxy" (Groot, omkhulu isihlahla-silwane, kusho amazwi amahlanu kuphela ngesikhathi ifilimu), ne-Iron Giant (ikhathuni irobhothi alien).
Wayethanda rapper kanye break dance.
udumo olukhulu analo afakaze izigidi eziyikhulu ababhalisile ekhasini lakhe ku-Facebook.
Zonke Tattoos zingezesikhashana Vin Diesel.
Wakwazi sokuqongelela imali eshisiwe.
Udizili akuyona nje umlingisi abanamakhono, yena njalo eziningi amaphrojekthi nemboni yezikaqedisizungu. It has inkampani ukukhiqizwa yokukhiqiza kanye inkampani ekukhiqizeni imidlalo yama-computer.
Isikhwama amadoda imfashini sika ehlombe
Indlela ukubhaka ikhekhe Pincher
10 izinhlobo zokucindezeleka: uhlole ukuze ubone ukuthi omunye wabo unayo!